Raha Nanana Basy Aho · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraJeremy Adam Smith
Voadika ny 09 Jolay 2016 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny Català, Italiano, Ελληνικά, Español, عربي, Français, čeština , bahasa Indonesia, Swahili, English
SARY: Ho an'ny daholobe tao amin'ny Pixabay.
Henoy ny feon'i Jeronimo Yanez taorian'ny nitifirany an'i Philando Castile. Ito no reko: Feon-dehilahy iray naniry ny ho olona tsara miaraka amin'ny basy, mifanehatra amin'ny zavamisy hoe mety ho izy no ilay lehilahy ratsy—ilay bandy mampahatahotra, ilay tovolahy izay miaro ny tenany ao anatin'ny haizina, ary tsy miaro ny hafa amin'izay horohoro manontanona, nefa mihevitra ny tenany ho manao ny asan'ny polisy iray manampahefana.
Na, farafaharatsiny, reko ao anatin'ny feony fa ny fanatontosana izay fitifirana izay, nahitàna lehilahy iray miaraka aminà vehivavy iray sy ankizy ao anaty fiara, dia zavatra iray masiaka sy mahatsiravina, ary tsy misy izay maha-maherifo velively na kely aza. Ho an'ny sofiko, tsy misy afa-tsy hirifiry sy tahotra tao anatin'ny feony.
Nieritreritra momba an'i Castile ihany koa aho. Nitàna basy izy satria nihevitra fa mety ho afaka hiaro azy tsara iny. Angamba nanonofy be loatra izy, na nitantara angano tamin'ny tenany ihany, amin'ny fampiasàna ilay basy mba hiarovana ny olona ambany fiahiany. Raha tsy nanana basy ilay ranamana, mety mbola velona teo i Castile, nalalaka mbola afaka manao hadisoana sy mitia ary mankahala sy mitombo, mety efa adinon'i Yanez sahady ny momba ilay tapakila izay nosoratany noho ilay jiro aoriana vaky, sy Diamond Reynolds ary ny zanany vavy mety tsy ho niaina nofy ratsy mandritry ny andro sisa iainan'izy ireo.
Nieritreritra ihany koa momba ireo fotoana rehetra nianjadian'ny herisetra tamin'ny fiainako aho, ary nanisika an'eritreritra basy iray ho eo an-tànako. Roa herinandro lasa izay, nahita lehlahy iray nanendaka vehivavy iray tao anaty Telegraph izaho sy Liko. nitsambikina aho sady niteny zavatra kidaladala toy ny hoe, “Eh, Ajanony, tsy mety izao!” Nanapaka ny asany izany. Nibanjina ahy ilay bandy, nanakimpy maso, ary lasa nandeha. Avy eo izy niverina ary niala tsiny tamiko sy tamin'ilay ramatoa (tamin'ny fomba hafahafa, saingy tantara hafa ny amin'izay– ary eny e, niantso polisy aho, na nanandrana nanao izany–saingy mbola tantara hafa koa ny amin'izay). Nanao ahoana raha nanana basy tao anaty akanjoko aho? Mety tonga dia tany ny tànako no nandeha avy hatrany. Mety nitondra ho amin'ny teny maherihery kokoa, sy mampifanolana bebe kokoa ny fisian'ny basy. Mety ho nanatri-maso ny fitifirako an'izay lehilahy izay ny zanako lahy, na nifititra mpitangongorona teo. Na mety ho ny zanako lahy mihitsy aza no voatifitro, raha mandeha amin'ny tsy falehany ny zavatra rehetra.
Saingy tsy nisy nitranga izany rehetra izany. Velona ny rehetra. Rehefa mihevitra ireo fotoana nanafihana ahy aho, na nandrahonana ahy, na nanatrehako herisetra, tsy vitako ny misaina ohatra iray mety hitondran'ny basy vokatra tsara kokoa amin'ny toedraharaha. Izany akory tsy entiko hilazana fa hoe tsy hisy velively ny fotoana mety hahafahan'ny basy manampy. Fa ny zavatra niainako no miteny amiko hoe hiavaka mivoaka amin'ny mahazatra ny tamin'ity indray mitoraka ity.
Nandritry ny faran'ny herinandro, nandalo toerana iray fivarotana fitaovam-piadiana i Michelle sy ireo zanakay lahy. Mazava loatra, naniry hiditra tao ireto ankizy ary nanao fijery adala tamin'ireo sabatra sy antsy ary basy. Takatro: voky sary maneho ireo bandy tsara mitondra basy izy ireo nandritry ny fiainany, ary dia te-hiesona ao anatin'ireny nofinofy ireny ao anatin'ny fotoana fohy. Nisalasala kely ihany aho hoe indray andro tany mety ho toy ireo zanako ihany koa i Jeronimo Yanez sy Philando Castile.
Leo, ireo marika amidy niantona tamin'ny rindrin'ilay fivarotana no nojereko: Hatreo ihany! Manana basy ny tompontrano ary tena atahorana! Mety ho vitan'ny fanarahamaso ny fitaovam-piadiana ny hamely ny lasibatrao! Nilaza tahotra sy fitokanà-monina daholo ny zavatra rehetra. Tsy nisy mihitsy nilaza hoe: Ndeha mifoka rivotra ary isao ny zavatra tsara eo amin'ny fiainana, ary tsarovy fa sady mety solafaka no sarobidy daholo isika rehetra.